Baraf wax ku ool ah oo ku yimaada Iskuxirka Tareenka Sivas. | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraGaaritaanka Gacan-ku-saarka ee Sivas Tababaraha Tababarka.
14 / 03 / 2012 06 Ankara, Nidaamka Isgaadhsiinta ee Intercity, DUNIDA, tareenka, GUUD, Headline, TURKEY
Baraf xoog leh iyo nooca tareenka ee Sivas saamaysay. Sababtoo ah xaaladaha cimilada xun iyo khalkhalka jidadka tareenada, saacadaha Ankara-Malatya iyo 35 ee magaalada Sivas, haddana Sivas ayaa mar labaad loo rogay tareenka. Tareenka ka yimid Sivas ilaa Cetinkaya waa inuu sugaa wakhti dheer taasoo ka dhalatay qulqulka tareenka. Ka dib markii la furay tareenka habeenkii, tareenka ayaa istaagay saldhiga Sivas. Rakaabka 4 ee sugaya tareenka ayaa lahaa waqtiyo adag. Rakaabka ayaa sugaya wakhti dheer saacadaha tareenka 100 ka dib markii loo diro jihada Kayseri. Rakaabka sheegaya in aysan cuni karin cuntada sababtoo ah looma oggola inay ka baxaan tareenka ayaa sheegay in ay ku qasbanaadeen in ay ku quudiyaan buskudkooda oo ay ku jiraan buskut iyo keega. Rakaabka ku andacoonaya inayan wakhti dheer gaadhsiin karin dawladda mana aysan xiiseynayn naftooda oo ay uga jawaabeen tareenka loo wareejiyay mar kale Kayseri. Tareenka Ankara-Malatya ayaa u socdaalay Malatya oo ka yimid Kayseri, arday jaamacadeed ah Mehmet Cem Mentes, waxaan wax ka baranaynaa Jaamacadda Elazığ. Waxaan tagnay Kayseri fuulitaanka. Habeeynimadii axadda waxaan tareenka ka qaadnay Kayseri. Waxaan tageynaa Elazığ wadada Malatya. Wax kastoo caadi ah wuxuu ahaa mid caadi ah ilaa booska Sivas Cetinkaya. Si kastaba ha noqotee, waxaa jiray qulqulka gawaarida, waxaana naloo sheegay inaan sugno wadada furitaanka. Isniintii wuxuu ahaa maalin uun. Waxaan halkaan ku sugeynay caawa. Jidka ayaa la furay habeenkii waxaana noo keenay xarun Sivas. Dhibaatadu ma ahan sida sugitaankeena, dhab ahaantii, ma aanan jecleyn daaweynta nasoo bandhigtay. Cuntada waxaa naloo siiyay kaliya buskut iyo casiir. Quraac waxaa la siiyey keega iyo shaaha. Lama oggola inaan baxno. Waxay yiraahdeen tareenku wuu dhaqaaqi karaa wakhti kasta. Waxa uu sheegay in ay jirto kacdoon joogta ah oo ayan wax macluumaad ah oo sax ah bixin. Mid ka mid ah rakaabku waa Burak Polat Waxa kaliya ee ay qaban karaan hadda waa inay naga celiyaan meesha aan ka baxnay. Waa inaan caadi ahaan joognaa Malatya Isniinta. Waxaan aadi karnaa iskuulkayaga Malatya illaa Elazığ. Waxaan qorsheyneynaa dhammaanteen si habboon. Waa inaan tagaa dugsiga talaadada oo waxaan soo gudbiyaa mashruuc muhiim ah. Laakiin waxaan weli ku jiraa magaalada Sivas, mana cadda in muddada safarku qaadan doonto. Rakaabka 35 oo sheegay in tareenka tareenka ee qasabka ah uu ku sameeyay xaalad adag, ayaa ka jawaabey diyaarinta duulimaad la'aan iyadoon helin macluumaadka ku saabsan cimilada iyo waddooyinka. Tareenka ayaa ka tagay xaruntii Sivas si uu ugu laabto Kayseri oo ku yaal 40'11. Rakaabka ka socda Kayseri ilaa Malatya ayaa sheegay in lagu gaarayo waddo.
Ereyada naxdinta leh ee ku saabsan 3.
TCDD 2012 Hawlaha Gaadiidka Gaadiidka.
Nidaamka tareenka, Malatya miyuu tartan u noqonayaa Bursa?